अन्तिम ८ मा स्विडेन वा स्विजरल्याण्ड या इंग्ल्याण्ड वा कोलम्बिया ? | Citizen Post News
अन्तिम ८ मा स्विडेन वा स्विजरल्याण्ड या इंग्ल्याण्ड वा कोलम्बिया ?
२०७५ असार १९ गते ०९:४५
काठमाडौं । रसियामा भइरहेको विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा प्रि–क्वाटरफाइनलको अन्तिम खेल नेपाली सयम अनुसार मंगलबार बेलुकी पहिलो र दोस्रो क्रमशः ७ः४५ र ११ः४५ बजे हुँदैछ । पहिलो खेल स्विडेन र स्विजरल्याण्डबीच हुनेछ भने दोस्रो खेल कोलम्बिया र इंग्ल्यान्डबीच ।
पहिलो खेल खेल्ने स्विडेन र स्विजरल्याण्ड यूरोपियन दुवै यूरोयियन मुलुक हुन् । यसअघि समूह 'एफ' मा रहेको स्विेडेनले कोरियालाई एक शुन्यले हराएको थियो भने जर्मनीसँग २–१ गोल अन्तरले पराजित भएको थियो । समूह चरणको अन्तिम खेलमा मेक्सिकोलाई ३-० गोलको अन्तरले हराएको थियो । समूह 'इ' को उपविजेता स्वीट्जरल्याण्डले भने सर्बियालाई २–१ गोल हराउँदै कोष्टारिका र ब्राजिलसँग क्रशमः २–२ र १–१ को बराबरी खेलेको थियो ।
त्यसैगरी आजै बेलुकी हुने दोस्रो खेलमा कोलम्बिया र इङ्ल्याण्डबीच भिडन्त हुनेछ । दुवै फुटबल टिम बलिया भएका कारण खेल निकै रोमाञ्चक हुने अनुमान गरिएको छ । कोलम्बिया समूह ‘एच’ को बिजेता बन्दै नकआउट चरणमा पुगेको हो भने इंग्ल्यान्ड भने समूह ‘जी’ को उपविजेता बन्दै नकआउट चरणमा आफ्नो स्थान पक्का गरेको थियो । यस हिसाबले इंग्ल्यान्डभन्दा कोलम्बिया बलियो देखिन्छ । यसअघि भएका खेलहरुबाट फ्रान्स, उरुग्वे, रुस, क्रोएसिया, ब्राजिल र बेल्जियमले अन्तिम आठमा आफ्नो स्थान बनाईसकेका छन् ।